Reachli: Netwọk Mgbasa Ozi Anya | Martech Zone
Anyị ekekọrịtala usoro nkwanye ọdịnaya ndị ọzọ dịka Ọpụpụ. Kedu ihe ma ọ bụrụ na ọdịnaya gị abụghị ederede na ọdịdị, agbanyeghị, ọ na-ahụkarị - dị ka Kupọns, eserese ozi, eserese ire ahịa, ịkpọ oku na ime ihe ma ọ bụ foto? Reachli bụ netwọkụ mgbasa ozi ọhụụ.
Reachli nwere ihe karịrị ndị mgbasa ozi 70,000 nke na-enweta ihe karịrị 3.5 nde elekere kwa ọnwa! Reachli nwere teknụzụ nwere njikọ abụọ na egwuregwu na-eji isiokwu, onodu, na foto dabara na algorithms iji tinye ihe oyiyi ọ bụla dị na weebụ na mgbasa ozi kachasị mkpa ma dị na ya. Ma oburu na ibu onye nkwusa nke nwere ihe nlebara na saiti gi na ihe omuma nke ndi mmadu, Reachli nwere ike inyere gi aka ichota obodo a.
N'ihi otu egwuregwu na HCCMIS, a mkpuchi njem ụlọ ọrụ, maka igosi m saịtị ahụ taa. Ndị ahịa ahụ nọ ebe ahụ na-arụ ọrụ dị egwu na-akwalite ọdịnaya anya ma na-enweta nnukwu nzaghachi! Ha bụ ndị ọkaibe B2C na-enyocha ma tụọ ihe niile ha na-eme.
Tags: netwọk mgbasa ozinetwọk mgbasa ozinkwusairuvisual mgbasa oziọdịnaya anya
RAMP: Mfe Nchọpụta Ọdịnaya N'etiti WordPress saịtị